खाडी नपसौँ, झाडी पसौँ: यसरी असुरो, तीतेपाती, वनमाराले बनाउँछ मालामाल ! – Sanjal Nepal
Homeरोचकखाडी नपसौँ, झाडी पसौँ: यसरी असुरो, तीतेपाती, वनमाराले बनाउँछ मालामाल !
November 21, 2020 admin रोचक 3610
काठमाडौँ – गाउँघरमा पाइने असुरो, तीतेपाती, वनमारालगायतका वानस्पतिक वस्तुको सदुपयोग गर्न नजान्दा त्यसै खेर गइरहेका छन् । उता दिनप्रतिदिन हाम्रा खेतबारीमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढ्दो छ । आफ्नै गाउँठाउँमा प्रशस्त वानस्पतिक वस्तु भए पनि प्रयोगमा बेवास्ता गर्दा रासायनिक मल, विषादीको प्रयोगले खेतबारीको उर्वराशक्ति नै नाश गरेको छ भने अर्कोतर्फ मानव स्वास्थ्यलाई नराम्रोसँग असर पारिरहेको छ । मानव स्वास्थ्य र खेतबारीको माटोको उर्वराशक्ति जोगाइराख्न पाल्पा रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगी सघाहाका कृषक ‘खाडी नजाऔँ, झाडी (ंगलज) पसौँ’ भन्ने अभियानमा जुटेका छन् । खेतबारीमा रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग बढ्दै जान थालेपछि यहाँका कृषकहरू घरेलु प्रविधिबाट झाडस सफाइ गरी मल उत्पादन सुरु गरेका हुन् । खेतबारीमा आवश्यक परेका बेला समयमा नै मल नपाइने र व्यापारीले पनि मल आपूर्तिको मौका छोपी कालोबजारीमा मल बिक्री गर्नेक्रम पनि उत्तिकै छ । दोब्बर, तेब्बर बढी मूल्य तिरेर रासायनिक मल खरिद गर्न कृषक बाध्य छन् ।
खेतीबारीमा रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति नै कम हँुदै गएको छ, गाउँघरमै खेर गएका वानस्पतिजन्य वस्तुलाई कुहाएर जैविक प्रांगारिक मल बनाएर प्रयोग गरियो भने उत्पादन बढ्नेछ भने अर्कोतर्फ खेतबारीको माटो नबिग्रने भएकाले घरायसी प्रविधिबाट मल तयार गर्न थालेका छौँ,’ उनले भने । घरायसी मल तथा विषादी खेतबारीमा प्रयोग गर्न थालिएपछि गाउँघरमा बाँदर आतंक पनि कम भएको उनले बताए । साथै धेरै उत्पादन लिन कृषकले मानव स्वास्थ्यलाई नै हानी पु¥याउने गरी बोटविरुवामा विषादीको प्रयोग गरिरहेका छन् । विषादी प्रयोगबाट उत्पादित कृषि उपजको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको जानकारी हँुदाहँुदै पनि विषादी प्रयोग गर्न भने कृषकले छाडेका छैनन् । यहाँका कृषक भने विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्नकै लागि यस अभियानमा जुटेर नमूना कार्य गरिरहेका छन् । उनीहरूले यो प्रविधिको प्रयोगले उत्पादनमा पनि फाइदा लिने योजना बनाएका छन् ।
रहिनन् १८ वर्षीया सुरेखा, हङकङ आ,गलागीमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या आठ पुग्यो !
दुई मुखे सर्प देख्ने बित्तिकै छोएर,ॐ लेख्दै सेयर गर्नुहोस्.. नसोचेको काम पुरा हुनेछ।
December 22, 2020 admin रोचक 9883
श्रीमान श्रीमती भएपनी एकअर्कासँग यी ५ कुरा लुकाउनैपर्ने हुन्छ !
November 23, 2020 admin रोचक 8864
श्रीमान र श्रीमतीले हरेक कुरा एकअर्कासँग साझेदारी गर्नुपर्छ । उनीहरू एकअर्कामा खुलस्त र पारदर्शी हुनुपर्छ । आफ्नो मनका लागेको कुरा निर्धक्क भन्नुपर्छ । यसरी उनीहरूबीचको अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्धले नै दाम्पत्य जीवनमा प्रेम र भरोसा दिगो राख्छ
November 22, 2020 admin रोचक 5438
काठमाडौं । एक पुरुष कल गर्लका नाममा नराम्रोसँग लुटिएका छन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको नोएडामा अनलाइनमार्फत कल गर्ल प्रदान गर्ने नाममा त्यसरी फसाइएको हो । जानकारी अनुसार त्यहाँका एक ३० वर्षीय व्यक्तिलाई कल गर्लका